China PP inonyungudika yakaridzwa extrusion mutsara vagadziri uye vanotengesa Kupfuma Mashini
Chipurasitiki Pelletizing Machine
Plastiki Firimu Inosvina Machine
Imwe / yakapetwa Shaft Shredder
Plastiki Kushambidza Line
Pipe yepurasitiki / maProfiles Ekuwedzera Mutsara
PP yakanyungudika yakaputirwa extrusion mutsetse
PP Melt inopepereswa extrusion mutsetse: Iyo muchina dhizaini neiyo imwechete sikuru yeiyo huru extruder, uye kudziyisa nekunyungudutsa iyo PP, wozobaya jekiseni kuumbwa, uye utore nemhepo yakamanikidza mweya, (iyo mhepo inoda pre-kudziyisa), ichivhuvhuta filamentary chimiro, gare gare kurapa ne electrostatic
PP Melt inopepereswa extrusion mutsetse: Iyo muchina dhizaini neiyo imwechete sikuru yeiyo huru extruder, uye kudziyisa nekunyungudutsa iyo PP, wozobaya jekiseni kuumbwa, uye utore nemhepo yakamanikidza mweya, (iyo mhepo inoda pre-kudziyisa), ichivhuvhuta filamentary chimiro, gare gare kurapa ne electrostatic, roller, slitting winder mudziyo, iyo yekupedzisira pp isiri-yakarukwa inogona kusvika kune 95medical giredhi. yakafara pakushandisa maski kuchengetedza zvinhu, Zvokurapa, kupukuta zvinhu uye zvichingodaro ...
Tinogona kupa muchina wePP yakanyungudika yakavhuvhuta saizi kubva 200mm 320mm 600mm 800mm 1200mm 1600mm 2400mm. Iyo PP yakanyungudika muchina muchina zvikamu zvikuru muforoma, isu tinosarudza china yakanakisa brand mould.chimwe chakakosha kuyedza, murume akanaka wekuyedza, anogona kuchengetedza yakawanda mutengo uye times.special ndeyeye tembiricha kudzora. Pano isu tinokwanisa kuendesa ese mazano ePP yakanyungudika akaridzwa muchina.form A kusvika Z.
mbishi-zvinhu: zvinonyunguduka PPGSM: 10-115g / m3
Chidimbu chekudyisa chinotora tekinoroji yakasarudzika yekambani, iyo inogona kubatsira kusanganisa kwezvinhu zvakasanganiswa uye kumanikidza kudyiwa kweiyo imwechete screw extruder kunatsiridza kugona uye mhando yegranulation;
Ose ari maviri coni sikuru uye iyo imwechete sikuru inotyairwa ne AC frequency shanduko tekinoroji, iyo inogona kuchinjika kune akasiyana tekinoroji zvinodiwa;
Iko kumberi kwemusoro wemuchina kunotora iyo hydraulic inokurumidza skrini yekuchinja chishandiso, iyo inochengetedza nguva uye kushanda uye ine zvakatipoteredza zvine hushamwari;
Iyo granulator inotora iyo inotenderera cutter musoro uye yakanaka-kugadzirisa tuneti yemhepo-yakatonhorera inopisa granulation;
Iko kutonhora kwemapellets kunotora dutu kupatsanura kuendesa uye dhiramu inotonhorera kana disc vibrating skrini;
Iyo yemagetsi control system inotora PLC, inoonekwa interface uye frequency kutendeuka tekinoroji kuti uone yakazara-maitiro otomatiki kutonga.
Zvadaro: agglomerator pelletizing muchina
imwe-sikuru pelletizing muchina
kaviri danho extrusion pelletizing muchina
agglomerator pelletizing muchina
yakafanana mapatya sikuruu extruder
single degas extruder muchina
kaviri degas imwechete-screw pelletizing muchina
UNO YAKO TORUI